HowTo: ArchLinux / Antergos + သိကောင်းစရာများမှာ Plasma 5.2 ကိုထည့်ပါ Linux မှ
HowTo: ArchLinux / Antergos + သိကောင်းစရာများတွင် Plasma 5.2 ကိုထည့်ပါ
Ya ငါတို့ပြတယ် Plasma 5.2 မှရရှိသောသတင်းနှင့်တိုးတက်မှုများ၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင် KDE ဗားရှင်းအသစ်အားမည်ကဲ့သို့တပ်ဆင်။ မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသပါမည်။ ဆုံသာအခြေစိုက်စခန်းစနစ်နှင့်အတူ။ ArchLinux ကို scratch ကနေ install လုပ်ရင်အတူတူပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Antergos မှာထပ်တူသိုမှီးရာနေရာများရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါများကိုသင်ကိုယ်တိုင်စွန့် စား၍ ပြုလုပ်သင့်သည်။ သင်၏ဒေတာများ (သို့) ထိုကဲ့သို့သောဘေးအန္တရာယ်များဆုံးရှုံးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်မရှိပါ။
1 Antergos ၏တပ်ဆင်
2 Plasma 5.2 ကို Installing
3 KDE 4.14.X သုံးစွဲသူများအတွက်သိကောင်းစရာများ
Antergos ၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး Ubuntu နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ Desktop Environment ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအဆင့်တွင်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည် baseဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်စားပွဲခုံကိုမှတပ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ KDE ကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းသည် KDE ဗားရှင်း 4.14.4 ကို install လုပ်လိမ့်မည်၊
Plasma 5.2 ကို Installing
ကျွန်ုပ်တို့သည် Antergos ကို install လုပ်ပြီးသားအဆင်သင့်ရှိနေပြီဟုယူဆပြီး Plasma 5.2 ကိုခံစားရန်လိုအပ်သည့် package များကို install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အကြောင်းပြချက်တခုခုရှိရင်ကွန်ရက်နဲ့ပြproblemsနာရှိနေတယ် Ethernet (မှတ်စုတိုသည်) သူတို့ DHCP ကို ​​သုံး၍ ၎င်းကို command ဖြင့်သက်ဝင်နိုင်သည်။
အခုငါတို့ run ဖို့ပဲ။
$ sudo pacman -S xorg plasma-meta konsole ပလာစမာ -nm sni-qt အောက်စီဂျင်ကိတ်
ယခုငါတို့ install လုပ်:
$ sudo pacman -S kdebase-dolphin kdemultimedia-kmix အောက်စီဂျင် -gtk2 အောက်စီဂျင် -gtk3 အောက်စီဂျင်-kde4 လေပြေ -kde4 kdegraphics-ksnapshot networkmanager
khelpcenter ကိုပconflictsိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်အခါဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ပြanyနာမရှိဘဲဖယ်ထုတ်သည်
ဤရွေ့ကား KDE ရှိအရာအားလုံးမှန်ကန်စွာဖော်ပြရန်အတွက်လိုအပ်သော packages များဖြစ်ကြသည်။ အသေးစိတ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။
meta-package xorg ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသည့်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်တူညီသောဗီဒီယိုကဒ်မရှိပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ KDE session manager ဖြစ်သော NetworkManager နှင့် SDDM ကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ရမည်။
$ sudo systemctl က sddm.service ကို enable $ sudo systemctl က NetworkManager ကို enable
KDE 4.14.X သုံးစွဲသူများအတွက်သိကောင်းစရာများ
ငါသည်အခြားပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း KDE ၏နောက် version တစ်ခု၏ packets များကိုလက်ရှိဗားရှင်းသို့တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာသည်နှင့်အတူ configuration files များကိုယခုအခါကွဲပြားစွာလက်ခံထားသည်။ KDE4 အတွက်အသုံးပြုသူရဲ့ settings ကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မယ် ~ / .kde4 /၊ အပလီကေးရှင်းအသစ်များအတွက်သူတို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည် ~ / .config / မင်္ဂလာပါ ဝီကီ ​​Arch.
အခုအတွင်းမှာ ~ / .config ခေါ်အလွန်အရေးကြီးသောဖိုင်ရှိသည် kdeglobals အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အောက်ပါ၏ငါဖော်ပြထားခြင်း: က applications များကြိုက်ကြောင်းငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ကိတ် o ထဲတွင် console ဖြစ်သည် ကျန်တဲ့ system အတွက်တော့သူတို့မှာထားခဲ့တဲ့ဖောင့်ကိုသူတို့မယူခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? လွယ်ကူပါတယ်။
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းသို့မဟုတ် ပို၍ နည်းသောအထွေထွေအပိုင်းကိုရှာဖွေသည် -
[အထွေထွေ] ColorScheme = Breeze အမည် = လေပြေ shadeSortColumn = စစ်မှန်တဲ့
Tahoma နှင့် Ubuntu Mono တို့ကိုစနစ်အတွက်အသုံးပြုသောဖောင့်များကိုအစားထိုးရမည်။ PC ကို restart လုပ်ရန် (သို့) session မှထွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ application ကိုပြaနာတစ်ခုနှင့်သာပိတ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » HowTo: ArchLinux / Antergos + သိကောင်းစရာများတွင် Plasma 5.2 ကိုထည့်ပါ
- အခြေစိုက်စခန်းမှ WiFi ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ထို့ကြောင့် Ethernet cable ကိုချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် Archbang ကို အသုံးပြု၍ Plasma5ကိုသုံးလိုသည်၊ တည်ငြိမ်မှုမည်သို့ရှိမည်နည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂
root ထည့်လိုက်ရင် # wifi-menu နဲ့ကွန်ယက်ကိုရွေးပြီး pass ကိုထည့်ဖို့ဥပမာတစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မယ်။ ထို့နောက် # ping -c3နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုသင်စမ်းသပ်နိုင်သည် http://www.google.com.ar ချိတ်ဆက်မှုရှိ၊ မရှိချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီကြီးမြတ်တဲ့ post ကနေငါလုပ်ခဲ့တယ် https://blog.desdelinux.net/guia-de-instalacion-de-arch-linux-2014/
Jose Jácome ဟုသူကပြောသည်
Arch Kmix ရှိ Plasma သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်၎င်းသည် boot မှမစတင်ပါကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ System tray ထဲမှာ Volume Control ထည့်လို့မရဘူး
ငါ OpenSUSE Tumbleweed တွင် plasma5ကိုစမ်းသပ်နေပြီး kmix သည် tray တွင်ပြwithoutနာမရှိဘဲစတင်သည်။ ၎င်းသည် kmix နှင့် kmix5 ဖြစ်လျှင်သင် kmix ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အခုထိကျွန်တော့်ကိုချိတ်ဆွဲထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ၎င်းသည်သိုးအမြောက်အများစားသုံးသည်။ plasmashell သည် ၁၅၀ megabytes မှစတင်ပြီးမိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် ၂၃၀ သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး application များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာဖွင့်နိုင်သည်။
"မကောင်းတဲ့" အရာကပြတင်းပေါက်အလှဆင်သူအတွက်အောက်စီဂျင်အခင်းအကျင်းကိုငါရှာမတွေ့နိုင်တာပါ၊ အထက်ခန်းကလေပြေလေကိုငါသဘောကျသည်။
ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်းပရိုဂရမ်များအားလုံးကို qt5 သို့သယ်ဆောင်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ပလာစမာ ၅ သည်ဗားရှင်း ၄ ကိုဆက်ခံထိုက်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ဒါက "bug" ပါ။
"တောင်းဆိုရန်အကြောင်းပြချက် - kmix-14.12.1-1 သည် Plasma5အောက်ရှိသင့်လျော်သော kmix အတွက် kmix-multimedia လိုအပ်သည်။ "
နောက်တစ်ရက်တွင် kdemultimedia-kmix ကို "Kmix" ဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည်။ သငျသညျ link ကိုပိုမိုမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုနိုင် ...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @hector၊ ကျွန်ုပ်မှာ kmix မဟုတ် kmix5 ရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအောက်စီဂျင်နဲ့တူတယ်။ ပြီးတော့ @ BD550 RAM Plasma မှအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည် 4200MB ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
နောက်ထပ်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ“ kmix-multimedia” ကို System Preferences -> Startup and shutdown တွင်ထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ startup မှာ run ရန်။
ငါ did လုပ်ခဲ့တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ sddm နှင့်ပြproblemsနာရှိသူများအတွက်၊ ၎င်းသည်ထည့်သွင်းမထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
pacman -Sddm နှင့် voila တို့ဖြင့် Install လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ရရှိထားသည်မှာအဆင်ပြေပုံရသည်။ သို့သော်ငါတွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း kde 4.14 မှ brezee ပြwithနာသည်အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့်နောက်ခံပုံများကိုပင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရာအားလုံးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သည်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်သင် login ပြုသကဲ့သို့ session သည်နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်နေလိမ့်မည်
ငါမနေ့ကငါ Arch ထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အရာအားလုံးက၎င်း၏အရပျ၌သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။ ဒီပြောင်းလဲမှုကကျွန်တော့်အတွက်အထူးစိတ်ထိခိုက်စရာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ငါ KDE 4.14 နှင့်အတူရှိခဲ့အချို့သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက Plasma5အိုင်ကွန်တွေ (မီနူးထဲမှာ၊ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ထုတ်ကုန်ဝစ်ဂျက် (သို့) သီဟိုeven်ပင်) gigရာမကြည့်တဲ့သူ၊ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်ပtheိပက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာမသိဘူး၊ S
ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိသည် xD သည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ သို့သော် xd သည်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် "sddm" ကို "start" option ဖြင့်စတင်ရန် "enable" က "ရှိပြီးသားကျရှုံးခြင်းဖြစ်သည်" ဆိုသောကြောင့် - သင်ဖြေရှင်းရန်အကြံပြုချက်များရှိပါသလား။ ပြီးတော့သင်အကြံပြုတဲ့“ အခင်းအကျင်း” လား။ ရွှင်လန်း!
Hello shini-kire, သင် install လုပ်ထားသောအရာကိုပိတ်လိုက်ရုံနှင့် sddm ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ gdm "$ sudo systemctl disable gdm.service" ကိုပိတ်ပြီး sddm "$ sudo systemctl enable sddm.service" ကို enable လုပ်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ပါ။
harc marcano အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၌ kde4တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းရှိသည့် Arch တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားသိရှိစေရန်နှင့် plasma5ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး စွာ uninstall လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်မည်သည်ကို install ရမည်နည်း။ ? ကျွန်ုပ်၏လိုချင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များမှဖျက်သိမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
hi jedr93, သင်ထည့်သွင်းထားသော "$ sudo pacman -Rc kdebase-workspace" ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး plasma $ $ sudo pacman-plasma-meta ကို install လုပ်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဝီကီမှတဆင့်လမ်းညွှန်နိုင်သည်။ https://wiki.archlinux.org/index.php/Plasma
ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါတည်ငြိမ်နေပြီလား။ ကျွန်ုပ်တွင် klin 4.14.8 နှင့်အတူ archlinux ရှိပြီး kde plasma 5.2 ကိုလုံခြုံစွာထည့်သွင်းလိုပါသည်။
ဟယ်လို! နေကောင်းလား ?
ငါ Arch ၏သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးသင်ညွှန်ပြခဲ့သည့်အရာအားလုံးကို install လုပ်သည်ကိုသင်သိသည်။ သို့သော်ပတ်ဝန်းကျင်သည်အဆင်မပြေပါ။ KDE bar ကို log in လုပ်ပြီးသောအခါ desktop သည်ကောင်းစွာမတင်နိုင်သကဲ့သို့ငါ၏ဘေးထွက် menu သာရှိသည်။ ပုံများ - ဗွီဒီယို - တေးဂီတ»နှင့်ကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ဘာဖြစ်နိုင်လဲသိလား
သင့်ကွန်ပျူတာကို ping မှကာကွယ်ပါ
Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ